DISTRIKAN’AMBATO BOENY : Zazavavikely novetavetaina ary novonoina ho faty
Mirongatra eny anivon’ny fiarahamonina Malagasy. Mampivarahontsana hatrany ankehitriny ny trangana fanolanana, herisetra maro karazana izay mianjady amin’ireo ankizivavikely tsy ampy taona. 18 octobre 2021
Miaina ao anaty tebiteby fatratra ireo ray aman-dreny ka tsy mitsahatra manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana mandrakariva ny ankabeazan’izy ireo mba hanamafy ny paikady apetraka ka hamongorana sy hanomezana sazy henjana ireo olona mahavanon-doza. Tsikaritra mantsy fa mihalasibatra ireo zazavavy tsy ampy taona, eny hatramin’ireo.
Ny loharanom-baovao voarainay mahakasika ity tranga ity ary dia fantatra indray fa nisehoana fanolanan-jaza mahatsiravina tao an-tampon-tanànan’ Ambatoboeny, tamin’ity herinandro ity. Niafara tamin’ny fahafatesana mihitsy moa izany, raha ny tatitra voaray hatrany.
Novetavetaina sy novonoina
Ny fanazavana voaray dia ny harivan’ny alatsinainy 11 oktobra 2021 lasa teo no niseho ny tranga. Nanambara tamin’izany moa ireo mpifanolobodirindrina nahita ny raharaha fa nisehoana ady tao an-tranon’ilay zaza. Voalaza ho niady laoka hariva tamin’ny zokiny vavy iray ity farany ka avy hatrany dia vaky nandositra, nitsoaka niala tao an-trano raha toa ka natahotra ny kapoka saika hatao azy. Ny andro efa nihamaizina rahateo ka tamin’io fotoana io no nohararaotin’ ireo olon-dratsy ilay zaza. Nifanena tamina andiana lehilahy izy ka avy hatrany dia noentin’izy ireo novetavetaina sy nampiharana herisetra tany an-tranony. Vehivavy iray mpiara-monina tamin’ireto olona nahavanon-doza moa no nahatsikaritra ny asa ratsy nataon’izy ireo rehefa nandeha hindrana kifafa. Efa nitsirara teo ampovoan-trano, tsy nisy aina intsony ilay zazavavikely no hitan’io vehivavy io, raha ny tatitra ihany. Avy hatrany dia nampahafantatra ny havany sy ireo manam-pahefana ny zava-misy moa izy, ka natomboka ny fikarohana ireo nahavanon-doza efa nitsoaka lavitra ny tanàna.
Lehilahy 2 voasambotra
Avy hatrany dia nandray andraikitra nisambotra ireo tsy mataho-tody moa ny mpitandro filaminana, ny harivan’ny alatsinainy lasa teo iny. Tsy lavitra akory dia tra-tehaka ny roa lahy izay nitsoaka tany amin’ny lalana hivoaka ny tanànan’ Ambatoboeny. Roa lahy izy ireo no voasambotra ka noentina avy hatrany nihazo an’i Mahajanga aloha mba hisorohana ny fitsaram-bahoaka sy korontana. Marihina mantsy fa efa nivonona hanao fitsaram-bahoaka avokoa ireo mponina tao an-tanàna. Mbola mitohy amin’izao fotoana izao ny fanadihadiana lalina ireo voasambotra, karohina ny naman’izy ireo satria ahiana ho naolana tambabe nataon’ireo andiana tanora io zaza io, ka izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Miantso ny tompon’andraiki-panjakana, ny mpitandro filaminana ihany koa ny fianakavian’io zaza io mba handray fepetra hentitra amin’ireo olon-dratsy nanimba sy namono ny zanak’izy ireo izao. Nanambara moa ny fianakaviana fa tsy hanaiky moramora ny raharaha fa tsy maintsy handray fepetra ho an’ireo olona voasambotra nanatanteraka izao herisetra izao. Manohy ny famotorana ny mpitandro filaminana mandray an-tanana izany, ka arahina akaiky ny tohin’izany.
Vonona sy hiady hatrany i Mialy Rajoelina
Eo anatrehan’ireo tranga maro niseho dia tsy miraviravy tanana tokoa ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny fa mitady vahaolana. Isan’izany Ramatoa Mialy Rajoelina vadin’ny Filoham-pirenena sady filohan’ny Fikambanana Fitia, “championne” amin’ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy sy mahavavy. Maro ireo toerana teto Madagasikara efa notsidihany sy nametrahany vahaolana hiarovana ireo zaza amam-behivavy ianjadian’izany. Nohamafisiny amin’ny lahateny fanaony mandrakariva moa fa “loza mikiky ny fiarahamonina misy antsika rehetra ny herisetra amin’izao vaninandro izao. Izany indrindra no antony nandraisako andraikitra satria vehivavy aho, vady, reny ary efa mba avy ankizy ihany koa. Maharary ahy loatra ny fisian’izany toe-javatra mamohehatra izany. Raha ny ara-tantara no jerena dia ao ireo kolontsaina mametraka ny vehivavy tsy mba ho tompon-tsafidy amin’ny lafim-piainana maro. Misy koa ireo fomba fisainana entina mihevitra ny vehivavy ho toy ny fanaka ao an-tokantrano. Ao ny fanaovana ny vehivavy toy ny entam-barotra mihitsy aza amin’ny alalan’ny fanondranana azy ireo an-tsokosoko. Ao ny fikasihan-tanana izay miafara amin’ny famoizana aina mihitsy aza. Porofo mivaingana miseho isan’andro ny herisetra eny anivon’ny fiarahamonina izao, ka tsy hihemotra izy ireo fa manohy ny ezaka hanavotana ireo mpiray tanindrazana aminy. Efa misy ny asa mivaingana vitan’izy ireo manoloana izany raha tsy hilaza fotsiny ireo fitaizana sy fanomezana fanofanana ary fandraisana an-tanana avy hatrany ireo ianjadian’ny herisetra hita amin’ny Faritra maro manerana ny Nosy .